16'96 Concepts | Yangon Furniture — Revamp : Aung Mingalar Shan Noodle Restaurant
Revamp : Aung Mingalar Shan Noodle Restaurant
Aung Mingalar Shan Noodles,abucket-must amongst tourists andabeloved go-to amongst us Yangonites, asked 16’96 Concepts to help them reimagine and actualizeafresh and authentic makeover. We asked help from our friends at The Designers’ Studio to explore what boundaries we could push. We knew that we wanted to stay true to their cultural aesthetic by incorporating key traditional elements that could be visibly felt, but we also wanted to take it upanotch by mixing contemporary, au courant details. With so many possibilities, the question was, where do we start?
ခရီးသွားများမဖြစ်မနေသွားစားသင့်သော၊ ရန်ကုန်သူ/သားများသွားနေကြနေရာဖြစ်သောအောင်မင်္ဂလာရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်မှ 16’96 Concepts အားသူတို့ဆိုင်ကိုပရိဘောဂနှင့်ရွှိုင်းပေးပါရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ 16’96 နှင့် The Designers’ Studio (interior design firm) အတူတူ အောင်မင်္ဂလာရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပုံစံကိုလည်း မပျက်စေဘဲ ခေတ်မီဆန်းသစ်သော concepts တစ်ခုကို ရှာဖွေပေးခဲ့သည်။
Fun Design Challenges
Aung Mingalar’s current setup was quasi-traditional (i.e old furniture with modern lighting fixtures) and wasaquintessential example of an inefficient use of space (too many tables and chairs no one actually sat on). By effectively reorienting their space economy, and by reducing their overall number of chairs and tables, we helped cater to their optimum capacity. Visually, it opened up the overall space, making it feel more inviting and comfortable. It also maximized walkways for customers and their waiters alike, making the flow of movement more seamless and free,abonus forabusy restaurant like Aung Mingalar.
အောင်မင်္ဂလာ၏အရင်ပုံစံမှာရိုးရာတစ်ဝက်၊ ခေတ်မီတစ်ဝက် ဥပမာ- ပရိဘောဂအဟောင်းများနှင့် ခေတ်မီသောမီးဆိုင်းများတို့ကိုတွေ့ရသည်။ ဆိုင်မှာအမြဲတမ်းပြည့်လျှံနေသော်လည်း space usuage မှာ effencient မဖြစ်တာကိုတွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့က စားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်ပြောင်းပြီး အရေအတွက်ကိုအနည်းငယ်လျှော့ချလိုက်ခြင်းဖြင့်အမြင်အားဖြင့်လည်း ပိုကျယ်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိကာ လာလည်ချင်စဖွယ်လည်း ဖြစ်စေသည်။
For its furnishings, we all aimed for simplicity because simplicity stands the test of time. We also didn’t want to introduce an entirely alien concept that challenged Aung Mingalar’s existing charm and soul. Like their old tables and chairs, we mixed materials -- wood and steel. This time, 16’96 Concepts wanted to elevate their wooden tables by introducing Kyet Mauk,atable that charms with its floating tabletop effect. Unlike their previous coating, we kept the legs super matte and classy.
အောင်မင်္ဂလာရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်ဟာနှစ်၂၀ ကြာ ဖောက်သည်အများအပြားရှိခဲ့တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မင်္ဂလာရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်ရဲ့နဂိုနှစ်လိုဖွယ်ပုံစံနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ ပုံစံကိုလည်း မပြောင်းချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံအဟောင်းတွေကို သစ်တို့၊ စတီးတို့နဲ့ရောစပ် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ 16’96 ကသူတို့ရဲ့သစ်သားစားပွဲတွေကို ကြက်မောက်စားပွဲနဲ့ အစားထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။
Balancing aesthetic harmony and utility. Keeping budgets shipshape. Working with multiple stakeholders. Three months to plan, but three days to execute. We believe the transformation unfolded beyond what the drawings and mockups had planned. The way the pendants lit with patterns on the ceiling shouts #mood in all the right ways. Slurping away your favorite Mee Shay Noodles on comfortable chairs and beautiful tables makes the Aung Mingalar experience all the more delicious.
It was an absolute joy working with Aung Mingalar, Asia Wood, and The Designers’ Studio. To all the foodies out there, please drop by at the restaurant and let us know what you think of the transformation! Give usalittle love by sharingapicture with the hashtag #1696sentus.
အမြင်ကော၊ အသုံးဝင်မှုကောအချိုးကျစေသည်။ budget ကိုလည်းထိန်းထားသည်။ အဖွဲ့အစည်း အများကြီး နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါသည်။ စီစဉ်ရတာသုံးလလောက်ကြာပေမယ့်တကယ် installation အတွက်ကတော့ သုံးရက်ဘဲကြာပါသည်။ မျက်နှာကြက်ပေါ်မှာ မီးဆိုင်းလေးတွေတောက်ပနေပုံကနွေးထွေးတဲ့ ခံစားချက် ပေးပါသည်။ အောင်မင်္ဂလာမှာအကြိုက်ဆုံးမြီးရှည်ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ထိုင်ခုံနဲ့လှပတဲ့စားပွဲပေါ်မှာ စားရတာပိုပြီးအရသာရှိပြီးအမှတ်ရနေစေဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။
အောင်မင်္ဂလာ၊ Asia Wood နှင့် Designer’s Studio တို့နှင့်အလုပ်အတူတူလုပ်ရတာအရမ်းပျော်စရာ ကောင်းခဲ့ပါသည်။ အစားအသောက်ကြိုက်သူလေးတွေလည်းအောင်မင်္ဂလာမှာသွားစားပြီး ပြောင်းလဲသွားပုံကိုပြောပြပါဦး။ဒါလေးကို #1696sentus နဲ့ share ပေးဦးနော်။
Revamp StoriesKimiko - November 30, 2018 Kyet Mauk Table, Da Yin Mote Stool, restaurant, furniture, yangon furniture, modern yangon furniture, modern furniture, table, wooden table, Dining TableComment
Be Bold, Behold, Mixed Materials in Furniture
Furniture TrendsKimiko - January 31, 2019 16'96 Conceptsblog, yangon furniture, furniture, modern furniture, modern yangon furniture, Mixed Materials, Steel, Asian Oak, Rubber Wood, Satin Walnut Finish, Home Furniture
From Concept to Tangible: Ya Pa Lat Chair
Product JourneyKimiko - November 12, 2018 chair, ya pa lat chair, dining chair, in the making, blog, yangon furniture, furniture, modern furniture, modern yangon furniture